> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad si iPhone Si fudud
Lumiso music iPhone shil, laakiin nasiib wanaag leedahay heesaha oo dhan aad iPad? Iibsi 6s iPhone brand-cusub lagu daray, oo aan la sugi karin in ay soo dhoofsadaan songs iPad aad u leedahay? Ma doonaysaa inaad la wadaagto songs cadaalad-dhawaajiyeen oo u dhexeeya iPad iyo iPhone? Waxba ma ahan wixii ay tahay, ma ahan adag tahay in laga iPad (macruufka 9 taageeray) si iPhone (iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus ka mid ah) lagu wareejiyo music.
Xalka 1: songs Transfer ka iPad si iPhone la TunesGo
Xalka 1: Transfer music ka iPad si iPhone 1 Click la MobileTrans
Xalka 2: songs Transfer ka iPad si iPhone la TunesGo
Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) waa Saaxiibkiis boosaska badan Lugood, aad daynin maaraynta dhammaan xogta ku saabsan iPhone iyo iPad. Waxay awood u aad si ay u maareeyaan aaladaha Apple badan waqti isku mid ah. Sidaas darteed, waxaad u isticmaali kartaa si aad u hagaagsan music ka iPad si iPhone. Waxaa gabi ahaanba isku tallaabooyin la "beddelashada Music dhexeeya iPhone iyo android". Fiiri tallaabooyinka fudud ee hoose.
Download TunesGo (la heli karo macruufka 9) aad kombuutarka.
TunesGo - Download, Transfer u maamuli lahayd music aad macruufka / Android Devices
Tallaabada 1. Isku aad iPad iyo iPhone la PC
Ka dib markii ay soo degsado this software iPad si iPhone kala iibsiga on your computer, waa in aad u maamula double-riixaya icon ku saabsan desktop PC. Markaas, xirmaan iPad iyo iPhone la your computer via fiilooyinka USB ah isku mar.
Markaas, aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta aad iPad iyo iPhone (macruufka 9 taageeray) on column bidix ee kooxda reer, oo ay ku jiraan music, videos, playlists, sawiro, xiriirada, iyo SMS.
Tallaabada 2. Nuqul heeso ka iPad si iPhone
Si aad nuqul ka songs iPad si iPhone, marka hore waa in aad guji Media , tab ee hoos aad iPad. Riix Music at line ugu sareeya. Markaas, dooro songs in aad rabto in aad u dhoofiyaan si aad iPhone. Marka aad dhamaysato, guji saddexagalka yar rogay hoos dhoofinta in .
Tani waxay keeni doonaa liiska hoos-hoos. Markaas doortaan inay u dhoofiyaan si aad iPhone. Qalab kala iibsiga Tani bilaabo inuu dhoofin music on iPad in aad iPhone. Ha iloobin in aad sii labadaba aad iPad iyo iPhone xiran PC inta ay socoto music kala iibsiga aad.
Fiiro Gaar ah: Dhammaan iPad iyo iPhone socda macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5 lihin Wondershare TunesGo Retro. Waxay tahay iPhone 6s Plus / 6s / 6/6 Plus / 5 / 4s / 4 / 5s / 5c / 3GS, hawada iPad, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad cusub, iPad 2 iyo iPad.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad horay u wareejiyo songs iPad si iPhone. Waxaad ku hubin kartaa adigoo gujinaya badhannada iPhone. Under geed ay buugga, guji Media > Music .
Xalka 2: music Transfer ka iPad si iPhone 1 Click la MobileTrans
Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waa qalab kala iibsiga phone hal-click. Waxaa si gaar ah loogu tala galay inuu kaa caawiyo inaad ku wareejiso music, video, sawiro, xiriirada, iMessages iyo kalandar ka iPad si iPhone. Just download version saxda ah ee MobileTrans (la heli karo macruufka 9) oo ku xidh on your computer.
Tallaabooyinka fudud hoose ayaa kuu sheegaya sida loo ka iPad wareejiyo music inay iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS la version Windows ah. The version Mac shaqaysaa si la mid ah.
Tallaabada 1. Daahfurka Wondershare MobileTrans on your computer
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan MobileTrans on your computer. Waxa maamula. Markaas, furmo suuqa hoose u muuqataa. Riix Phone in Transfer Phone .
Fiiro gaar ah: Si aad u hesho info badan oo ku saabsan iPads taageeray iPhone in ay maamulaan macruufka 9/8/6/5/7, waxaad eegi kartaa halkan .
Tallaabada 2. Isticmaal fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad iyo iPhone in computer
Isticmaal fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad iyo iPhone in computer. By default, aad iPad lagu muujiyay bidixda, oo aad iPhone on xaq. Haddii aad jeceshahay inaad bedesho meelaha ay, waxaad riixi kartaa Flip . Marka aad heeso badan aan la rabin aad iPhone, waxaad eegi kartaa macluumaadka ka hor inta Clear nuqul . Ama, waxaa iska daa.
Fiiro gaar ah: Si aad music ka iPhone wareejiyo iPad, waxaad riixi kartaa Flip in la beddelo meelo ka mid ah iPhone iyo iPad.
Tallaabada 3. Transfer heeso ka iPad si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS
Sida aad ka arki, dhammaan xogta aad ku wareejin karaa saxday. Si aad u wareejin music, waxaad u baahan tahay inaad uncheck sanduuqa hor waxyaabaha kale. Ka dib markii in, riix Start Copy si ay u gudbiyaan music iPad si iPhone. Ha illoobin in aad iPad iyo iPhone ku xiran waqtiga oo dhan.
Download MobileTrans in music diri ka iPad si iPhone (macruufka 9 taageeray).
Video Tutorial u beddelashada Music ka iPad si iPhone